Iwu nyere ka ọ bụrụ "nduku na -ekpo ọkụ" maka ụlọ ọrụ akwa na China
N'oge na-adịbeghị anya, n'ihi mmụba nke ikpe Covid-19 enwetara na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia dịka Vietnam, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nwere ike ịlaghachi China na obere oge. A na -egosipụta ụfọdụ ihe ịtụnanya na azụmaahịa, yana eziokwu na nrụpụta alaghachila. Nnyocha e mere na nso nso a nke Ministri Azụmaahịa na-egosi na ihe dịka 40% nke iwu mbupụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ azụmaahịa bịanyere aka abawanyela kwa afọ. Nlaghachi nke iwu esenidụt na-ebute ohere a na-enwetụbeghị ụdị ya maka obere na obere ụlọ ọrụ, na n'otu oge ahụ ọ na-ewetakwa nsogbu.
Dika nyocha emere n'oge na -adịbeghị anya n'ahịa akwa na Guangdong, Jiangsu na Zhejiang, na ụfọdụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi, ịkpa akwa, akwa, uwe na ọdụ ndị ọzọ anatala iwu nke ọma kemgbe ọnwa Julaị, na ha enweela ike ịmalite karịa 80% ma ọ bụ ọbụna mmepụta zuru oke.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ kwuru na kemgbe ọnwa Julaị na Ọgọst, iwu enyere na mba ndị mepere emepe dịka Europe, America, Canada na mba ndị ọzọ mepere emepe bụ ọkachasị ekeresimesi na Ista (ọkachasị iwu nloghachi sitere na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia pụtara nke ọma). Edebere ha ọnwa 2-3 tupu afọ ndị gara aga. Obere ọkwa, uru adịghị mma, mana usoro ogologo oge na oge nnyefe, azụmaahịa mba ofesi, akwa na akwa nwere obere oge zuru oke iji zụta akụrụngwa, nyocha, mmepụta na nnyefe. Mana ọ bụghị iwu niile ka enwere ike ire nke ọma.
Akụrụngwa na -agbada agbada, iwu na -aghọ “nduku na -ekpo ọkụ”
N'ihi mmetụta nke ntiwapụ nke ọrịa ahụ, a ga -eyigharịrị ọtụtụ iwu. Iji mee ka azụmahịa na -aga nke ọma, ha ga -arịọrọ ndị ahịa arịrịọ, na -enwe olileanya na ha ga -aghọta. Agbanyeghị, ndị ahịa ka na -echegbu ha, ụfọdụ enweghịkwa nhọrọ karịa ịnabata ndị ahịa kagbuo iwu n'ihi na ha enweghị ike ibuga ngwongwo…
Oge nke Golden Nine na Silver Ten na -abịa n'oge na -adịghị anya, ụlọ ọrụ chere na a ga -enwekwu iwu n'aka ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ihe ha chere bụ na akagbuola ma ọ bụ yigharị ihe ngosi ahụ, mba ndị ọzọ egbochikwala mba ha n'ihi ọrịa na -efe efe. Omenala obodo ebe ndị ahịa nọ adịkwa amalitela ịchịkwa ụdịrị ngwaahịa na mbubata dị iche iche. Ọrụ mbubata na mbupụ abụrụla nnukwu nsogbu. Nke a mere ka ndị ahịa zụọ ahịa nke ukwuu.
Dị ka nzaghachi sitere n'aka ụfọdụ ndị ahịa si mba ọzọ: n'ihi ọrịa na -efe efe, ihe arụpụtara nke mba niile etisaala nke ukwuu, erepụla ọtụtụ ngwaahịa ha, na ngwongwo dị n'ụlọ nkwakọba ihe ahụ eruola ntakịrị, na enwere mkpa ngwa ngwa. maka ịzụta. E kwesịghị ileda ọnọdụ nke mba Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia anya ugbu a. Iwu ndị si mba ofesi ka na -alaghachi, ụfọdụ ụlọ ọrụ China esiwo na "ụkọ ụkọ wee gbue iwu." Mana n'ihu mmụba nke iwu, ndị na -akwa akwa enweghị obi ụtọ! N'ihi mmụba nke iwu, ọnụ ahịa akụrụngwa na -arịkwa elu.
Onye ahịa abụghịkwa onye nzuzu. Ọ bụrụ na ọnụ ahịa na -abawanye na mberede, onye ahịa nwere nnukwu ohere iji belata ịzụrụ ihe ma ọ bụ kagbuo iwu. Ka ha wee dịrị ndụ, ha ga -eburu ọnụ ahịa na nke mbụ. N'aka nke ọzọ, ọkọnọ akụrụngwa arịala elu, na n'ihi mmụba ngwa ngwa nke ndị ahịa na -achọ, enwekwara ụkọ akụrụngwa, nke butere ụfọdụ ndị na -ebubata ihe nwere ike ha agaghị enwe ike ịnye akụkụ ụlọ ọrụ ahụ akụkụ. n'oge. Nke a butere n'eziokwu na ụfọdụ akụrụngwa akwa adịghị adị n'oge yana enweghị ike ibunye ya n'oge ụlọ ọrụ na -emepụta ihe.
N'ịkwalite mmepụta maka mbupu, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ chere na ọ ga -ekwe omume ibupu nke ọma, mana ha atụghị anya na onye na -ebubata ibu ga -ekwu na ọ bụ ihe siri ike ịtụ igbe ugbu a. Site na mbido nhazi nke mbupu, ọ nweghị mbupu na -aga nke ọma mgbe otu ọnwa gachara. Mbupu dị oke ọnụ, ọnụ ahịa ụgbọ mmiri arịala elu, na ọtụtụ amụbaala ọtụtụ ugboro, n'ihi na nnukwu ụgbọ mmiri akwụsịla ... A ga -ahapụrịrị ngwongwo a rụchara n'ụlọ nkwakọba ihe ka ichere, yana oge maka ịlaghachi ego. na -agbatịrị.
Oge ezipụ: Aug-31-2021
Copyright - 2020-2021: Ikike niile echekwabara.